U Gaar Ah Ragga: Weedho Jacayl Oo Xanuun Badan – Allsomali.net
HomeArimaha QoyskaU Gaar Ah Ragga: Weedho Jacayl Oo Xanuun Badan
U Gaar Ah Ragga: Weedho Jacayl Oo Xanuun Badan
29 January 2021 allsomali Arimaha Qoyska, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Mararka qaar ereyadu way ka xanuun badan yihiin in wax lagugu garaaco xilli ereyadu qalbiga ku reebaan saamayn ka badan ama dhaawac ka badan dhaawaca soo gaadha jidhkeena.
Sidaas darteed hadii aad la kulanto khiyaamo ama niyad jab ama aad waydo qof aad jeceshahay waxa aad dareemaysaa Niyad jab xun.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa kalma kalmado xanuun badan oo aad u diri karti marka ad qof waydo qof aad jeceshahay.
Maxaa ka xanuun badan in aan kuu baahdo laakiin aanan ku helin, in aan kuu xiiso laakiin aanan kula hadlin iyo in aan ku jeclaado laakiin aan ku heli waayo.
Waa wax fudud in wiil dhalin yaro ah Naftiisa u huro gabadh, waa wax adag in la helo gabadh u qalanta naf-huridaas, ha niyad jabin hadii gacalisadaadu ku khiyaamayso sababta oo ah waa shimbir ka cabaysa wabi walba.
Illhayow qalbigayga ka saar waxyaabaha dhaawacaya sababta oo ah aad ayaan u niyad jabsanahay, adiga ayaan cidna Niyad jabine.
Maxaa ka xanuun badan in aad isku daydo in aad istaagto mar kale laakiin wax kaa xoog badan hoos kuu jiidayo.
Maalin maalmaha ka mid ah waxa ay dareemi doonaan in aan ka dhintay oo aanan u soo laaban doonin.
Maxaa ka xun in aad muraayada hor istaagto laakiin aad naftaada garan waydo.
Maxaa ka xun in aad ku dhawaaqdo codkaaga ugu dheer laakiin uu codkaagu gaadhi waayo qofka aad jeceshahay.
Maxaa ka xun in aad hoostaaga dhigto wax walba oo aad hayso si aad u gaadho halka ugu saraysa laakiin aad ku dhibaatoonayso arintaas.
Waxa aan siiyay qalbigayga, jacaylkayga laakiin way lumisay wax walba, markii aan waydiiyay naftayda mee jacaylkaygii waxa ay iigu jawaabtay wuu lumya.
Waxa aan siiyay wax walba, waxa aan u sawiray, waxa aan u shiday dhamaan shamacyadeedii oo dhan, waxa aan ilmadayda ku masaxay gacmahayga, in aan iyada iloobo wax suurtagal ma ahan laakiin waxa aan iloobay in aan iloobo in ayna suuragal ahayn.
wax adag in aad jeclaato wax ka badan hal qof nolosha laakiin waxa ka adag in aad uruuriso wax ka badan hal jacayl.
Waxa adag in aad jeclaato qof aan ku jeclayn laakiin waxa ka sii adag in aad sii wado jacaylkiisa inkasta oo uuna wax dareen ah kuu hayn.
Way adagtahay in jacaylka daacada ahi kudhamaado wax aan micno lahayn, laakiin waxa ka sii adag kala maqnaanshaha in uu sii socdo sabab la xidhiidha in uu qof walba calaamad ka sugayo midka kale si ay isugu laabtaan.
Way adagtahay in la maca salaameeyo jacaylka laakiin waxa ugu adag ayaa ah in uu jacaylku ku dhamaado iyada oo aan markii ugu dambaysay la wadahadal.
Way adagtahay in laga kala tago jacayl laakiin waxa ka sii adag in hal dhinac jacaylka jeel ugu jiro.
Way adathay in aad doorato qofka aad jeceshahay laakiin waxa ka sii adag in aad isku daydo in aad nacdo qof aad jeceshahay.
Way adagtahay in aad wakhti khaldan qof jeclaato laakiin waxa ka sii adag in aad jeclaato qof khalad ah.
Way adagtahay in aad qof aad jeceshahay kaaga aabuso sababo aan cadayn laakiin waxa ka sii adag in uuna kuu sharixin sababta inkasta oo aan mar walba waydiinayso.
Way adagtahay in uu jacaylku ku soo laabto sidii hore kadib marka la kala tago laakiin waxa ka sii adag in aad sugto qofka soo laabanaya.
Way adagtahay in la kala doorto laba qof oo aad jeceshahay laakiin waxa ka adag in aad hesho qofka munaasibka ku ah jacaylka.
Way adagtahay in la kala doorto jacaylka iyo sharafta laakiin waxa ka sii adag in aad ku qasbanaato in aad midkood iska dhaafto.
Way adagtahay in la dilo jacaylka qalbigaaga ku jira laakiin waxa ka sii adag in ay dad kale isku dayaan in ay dilaan jacaylkaas.
Way adagtahay in aad naftaada u hurtid qof aad jeceshahay laakiin waxa ka sii adag in aad waydo qof adiga nafta kuu hura.
U Gaar Ah Ragga: Maka Cabsi Qabtaa In Ay Gabadhu Ku Diido Laakiin Maka Heshay Gabadha, Qaabkan Raac Waad Helaysaa Qalbigeeda Shaki La’aan.
Ma Doonaysaa In Aad Ogaato In Uu Ku Jecelyahay Ama Ku Jeceshahay? 9-kan Su’aal Ayaa Kaaga Filan Oo Aad Waydiin Kartaa.